Cu (MAYA3)2 + Na2SO4 →
naxaas (ii) amooniyam sulfate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu(NO3)2 + Na2SO4 →
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cu (NO3) 2 (copper(ii) nitrate) oo la falgala Na2SO4 (sodium sulfate)?
Dhacdada ka dib Cu (NO3) 2 (copper(ii) nitrate) waxay la falgashaa Na2SO4 (sodium sulfate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu(MAYA3)2 + Na2SO4 →
etanoic acid sulfate sodium acid sulfuric
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CH3COOH + Na2SO4 → 2CH3COONa + H2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa Na2SO4 (sodium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COONa () iyo H2SO4 (sulfuric acid)?
Dhacdada ka dib CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa Na2SO4 (sodium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga H2SO4 (sulfuric acid), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CH3COOH + Na2SO4 → 2CH3COONa + H2SO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COONa (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COONa () badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2SO4 (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2SO4 (sulfuric acid) alaab ahaan?
sulfate sodium chloride ammonium amooniyam sulfate chloride sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2NaCl
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2SO4 (sodium sulfate) oo ka falcelisa NH4Cl (ammonium chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa (NH4)2SO4 (ammonium sulfate) iyo NaCl (sodium chloride)?
Ku dar dhawr dhibcood oo ah ammonium chloride solution tuubada tijaabada oo ay ku jirto xalka sodium sulfate, si tartiib ah u rux
Dhacdada ka dib Na2SO4 (sodium sulfate) waxay la falgashaa NH4Cl (ammonium chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2NaCl
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (NH4)2SO4 (ammonium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (NH4)2SO4 (ammonium sulfate) alaab ahaan?
Na2SO4 + 2NH4MAYA3 → (NS4)2SO4 + 2NaNO3
sulfate sodium amooniyam amooniyam amooniyam sulfate soodiyam amooniyam
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2SO4 + 2NH4MAYA3 → (NH4)2SO4 + 2NaNO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2SO4 (sodium sulfate) oo ka falcelisa NH4NO3 (ammonium nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa (NH4)2SO4 (ammonium sulfate) iyo NaNO3 (sodium nitrate)?
Si tartiib ah ugu dar dhowr dhibcood oo ah amooniyam nitrate tuubo tijaabo ah oo ay ku jiraan xalinta sodium sulfate, si tartiib ah u rux
Dhacdada ka dib Na2SO4 (sodium sulfate) waxay la falgashaa NH4NO3 (ammonium nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2SO4 + 2NH4MAYA3 → (NH4)2SO4 + 2NaNO3